Safari inotangisa kushanda kutsva muOS X El Capitan | Ndinobva mac
Safari inotangisa mashandiro matsva muOS X El Capitan
Pedro Rodas | | apuro, Noticias, OS X Yosemite
Parizvino iwe uri kurodha pasi iyo nyowani yekushandisa yeiyo yakarumwa apuro, iyo system yemakomputa avo, iyo OS X El Capitan. Sisitimu inouya kuzogadzirisa OS X Yosemite matambudziko ekuita mukuwedzera pazvinhu zvitsva mukushanda kwayo.
Chimwe chezvinhu zvitsva zvinouya kubva muruoko rweSafari browser uye ndezvekuti kubva zvino zvichienda mberi tichakwanisa kuve nematepi akagadziriswa kuwedzera kune basa rinozoona mune iyo tabu kurira kwevhidhiyo kana kushambadza kuri kuridzwa uye kugona kumisa pasina kupindamo.
Wedu watinoshanda naye Miguel Ángel Juncos akatotiudza nezvazvo kubvira mavhezheni ekutanga e beta, asi nhasi tinoda kutaura nezvazvo zvekare sezvo mumaawa mashoma iyi nyowani sisitimu ichave iyo mamirioni evashandisi akaisirwa paMacs avo.
Pfungwa yatataura nezvayo haisi nyowani uye ndeyekuti mamwe mabhurawuza atoita basa rakafanana maererano nekunyarara kwemapeji aripo mune mamwe matabhu isu tichitsvaga. Sekureva kweSafari, nhau dzatinogona kuratidza ndedzinotevera:
Individual Tabs (mbeveve kana kutamba): Kubva nhasi uchakwanisa kutamisa iwo matabhi wega nekudzvanya pane mutauri icon pane iyo tebhu pachayo.
Nyarara kana kumisikidza tabo dzese kamwechete: Imwe mamiriro ezvinhu aunogona kusangana nawo ndeokuti iwe une akati wandei tabo akavhurwa panguva imwechete uye iwe unoda kuvanyaradza ivo vese panguva imwechete kana, zvinopesana, bvisa runyararo kubva kwavari ese kamwechete. Kuti uite izvi unofanirwa kushandisa mutauri kuti mune ino kesi iwe mune kero bar.
Nyarara kana kumisikidza mamwe matabhu kunze kwekunge isu tiri: Aya ndiwo mamiriro ezvinhu echitatu anogona kuitika uye ndeekuti kana iwe uchida kunyaradza iwo ese ma tabo kunze kweayo auri kubhurawuza mairi, unofanirwa kurudyi kubaya pane mutauri wetabhu kwauri uye panguva iyoyo zvese asi izvo zvicha nyarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Safari inotangisa mashandiro matsva muOS X El Capitan
Gregorio ruiz akadaro
Mushure meOS-El Capitan yaiswa, patsanura internet kubatana kune Parallels Desktop. Ndingaite sei kuti ndidzorere kubatana ikoko kana ndangotanga uye kubva Parallels Desktop Windows nharaunda.
Ini ndinokumbira rubatsiro rwenyu, kwaziso nekutenda pamberi.
Pindura Gregorio Ruiz
Maitiro ekuita yakachena kuisa yeOS X El Capitan